မိနျးမသားပဲလဆေိုပွီး ပြော့ညံ့နလေို့ မရဘူး – Shinyoon
ငါက မိနျးမသားပဲလဆေိုပွီး ပြော့ညံ့ပဈလိုကျလို့မရဘူး ။ ငါက မိနျးကလေးပဲလဆေိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို သိမျငယျနလေို့လဲ မဖွဈသေးဘူး ။ တဈခါတဈလမှော မိနျးကလေးတှကေ လောကဓံကို ပိုပွီးရငျဆိုငျရတတျသလို ပိုပွီးသနျမာပွရတယျ ။
ကြှနျမလဲ မိနျးကလေးတဈယောကျပါ . . .အားမငယျတတျဘူး မဟုတျဘူး အားငယျတတျပါတယျ ဒါပမေယျ့ ကိုယျအားငယျနတေဲ့အကွောငျးတှေ ဘယျသူ့ကိုမှ မသိစေ မမွငျစခေငျြဘူး လြှို့ဝှကျထားတယျ ကိုယျ့ကိုယျ သနျမာအောငျ နတေယျ နောကျဆုံး ပွိုလဲကခြငျြနရေငျတောငျ ဘယျသူ့မှ မမွငျတဲ့တဈဖကျမှာမှ ကြှနျမ အားရပါးရငိုခပြဈလိုကျတယျ ။ ဒါ ကြှနျမ ကငျြ့သုံးနတေဲ့နညျးလမျးလေးတဈခုပါ ။
မိနျးကလေးပဲလေ လှခငျြပခငျြစိတျလေးတော့ရှိတယျ ဒါပမေယျ့ သိပျပွီးနူးနူးရှရှလေးတော့ မနတေတျ မထိုငျတတျဘူး မိနျးကလေးသိပျမဆနျတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျပေါ့ ။ အိမျမှုကိစ်စတှထေကျ စီးပှားရေးလုပျရမှာကို ပိုပွီး စိတျဝငျစားတယျ ။ ဒါက ယောကျြားတှလေုပျရမှာလဲ လငျကောငျးသားကောငျးရရငျ အိမျမှာပဲနပွေီး အိမျမှုကိစ်စတှေ လုပျရမယျလို့မိနျးကလေးတှကေို မတှေးစခေငျြတော့ဘူး
ယောကျြားတှနေဲ့ ရငျဘောငျတနျးနရေမယျ့ ခတျေကို ရောကျနပွေီလေ ။ အိမျထဲမှာနေ ကိုရီးယားကားလေးကွညျ့ပွီး ယောကျြားလာတာကို ထိုငျမြှျောနရေမယျ့ မိနျးမသားတှေ နတေဲ့ ခတျေမဟုတျတော့ဘူး ။ အိမျထောငျရေးဆိုတာ လူနှဈယောကျရဲ့ဘဝကို ပေါငျးစညျးတာလို့ပဲ ကြှနျမတော့မွငျတယျ လူတဈယောကျရဲ့ ဘဝကို နောကျတဈယောကျက ထိနျးခြုပျနတော ခြုပျကိုငျနတောက အိမျထောငျရေးမဟုတျတော့ဘူး သူ့မှာလဲ သူ့အိပျမကျတှရှေိသလို ကိုယျ့မှာလဲ ကိုယျ့အိပျမကျတှေ ဆကျပွီး ရှိနရေမယျလေ ။
ငါက မိနျးကလေးပဲလဆေိုပွီး ပြော့ညံ့ပဈလိုကျတာနဲ့ ကိုယျ့မှာ မှီစရာပုခုံးတဈခုတော့ လိုအပျလာခဲ့ပွီလေ ။ အဲ့ဒီပုခုံးက ကိုယျ့မကျြရညျတှကေို သုတျပေး စာနာနားလညျပေးနိုငျရငျတျောသေးပမေယျ့ ကိုယျအားကိုးတကွီး မှီလိုကျတဲ့ပုခုံးက အပူတှထေကျပွီးပေးလာတဲ့အခါ အားနှဲ့တတျတဲ့မိနျးမသားမှာ ထပျပွီး အပူမြားရတာပဲ လောက က မကျြလှညျ့တအားဆနျတယျ အခုကောငျးခငျြကောငျးနပေမေယျ့ နောကျကောငျးခငျြမှ ကောငျးတော့တာမြိုး အဲ့တာကွောငျ့ ဘယျပုခုံကိုမှ မယုံစားပါနဲ့ ငါမိနျးမသား ဒါပမေယျ့ ကိုယျခွထေောကျပျေါကိုယျရပျမယျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ပဲ အသကျရှငျပါ ။
မပွတျသားတဲ့ မိနျးမက အကွိမျကွိမျအခါခါ နာကငျြရသလို အကွိမျကွိမျအခါခါ သရေတတျတယျ သတေယျဆိုတာ အသကျရှုရပျသှားမှ နှလုံးခုနျနှုနျးတှေ ရပျသှားမှ သသှေားတာ မဟုတျပါဘူး အသကျတှေ ရှုနပေါလကျြ ငါဘာကွောငျ့ အသကျရှငျနသေလဲဆိုတာ မသိတော့ရငျ ဆကျပွီးရှငျသနျနရေတဲ့ ရညျရှယျခကျြတှေ မဲ့သှားတဲ့အခါလဲ လူတဈယောကျ အသကျပဲ ရှငျနတေော့တာ သူ့ဘဝတှေ ရှငျမလာတတျတော့ဘူး ။
ဒါကွောငျ့ . . . ငါက မိနျးကလေးပဲဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ပြော့ညံ့ဖို့မတှေးနဲ့လိုအပျတဲ့အခါ ယောကျြားသားတှထေကျ ပိုပွီး သနျမာပွရတယျ ။
ငါက မိန်းမသားပဲလေဆိုပြီး ပျော့ညံ့ပစ်လိုက်လို့မရဘူး ။ ငါက မိန်းကလေးပဲလေဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိမ်ငယ်နေလို့လဲ မဖြစ်သေးဘူး ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ မိန်းကလေးတွေက လောကဓံကို ပိုပြီးရင်ဆိုင်ရတတ်သလို ပိုပြီးသန်မာပြရတယ် ။
ကျွန်မလဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ . . .အားမငယ်တတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး အားငယ်တတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်အားငယ်နေတဲ့အကြောင်းတွေ ဘယ်သူ့ကိုမှ မသိစေ မမြင်စေချင်ဘူး လျှို့ဝှက်ထားတယ် ကိုယ့်ကိုယ် သန်မာအောင် နေတယ် နောက်ဆုံး ပြိုလဲကျချင်နေရင်တောင် ဘယ်သူ့မှ မမြင်တဲ့တစ်ဖက်မှာမှ ကျွန်မ အားရပါးရငိုချပစ်လိုက်တယ် ။ ဒါ ကျွန်မ ကျင့်သုံးနေတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ ။
မိန်းကလေးပဲလေ လှချင်ပချင်စိတ်လေးတော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီးနူးနူးရွရွလေးတော့ မနေတတ် မထိုင်တတ်ဘူး မိန်းကလေးသိပ်မဆန်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့ ။ အိမ်မှုကိစ္စတွေထက် စီးပွားရေးလုပ်ရမှာကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ် ။ ဒါက ယောက်ျားတွေလုပ်ရမှာလဲ လင်ကောင်းသားကောင်းရရင် အိမ်မှာပဲနေပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွေ လုပ်ရမယ်လို့မိန်းကလေးတွေကို မတွေးစေချင်တော့ဘူး
ယောက်ျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနေရမယ့် ခေတ်ကို ရောက်နေပြီလေ ။ အိမ်ထဲမှာနေ ကိုရီးယားကားလေးကြည့်ပြီး ယောက်ျားလာတာကို ထိုင်မျှော်နေရမယ့် မိန်းမသားတွေ နေတဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး ။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ပေါင်းစည်းတာလို့ပဲ ကျွန်မတော့မြင်တယ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို နောက်တစ်ယောက်က ထိန်းချုပ်နေတာ ချုပ်ကိုင်နေတာက အိမ်ထောင်ရေးမဟုတ်တော့ဘူး သူ့မှာလဲ သူ့အိပ်မက်တွေရှိသလို ကိုယ့်မှာလဲ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေ ဆက်ပြီး ရှိနေရမယ်လေ ။
ငါက မိန်းကလေးပဲလေဆိုပြီး ပျော့ညံ့ပစ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်မှာ မှီစရာပုခုံးတစ်ခုတော့ လိုအပ်လာခဲ့ပြီလေ ။ အဲ့ဒီပုခုံးက ကိုယ့်မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေး စာနာနားလည်ပေးနိုင်ရင်တော်သေးပေမယ့် ကိုယ်အားကိုးတကြီး မှီလိုက်တဲ့ပုခုံးက အပူတွေထက်ပြီးပေးလာတဲ့အခါ အားနွဲ့တတ်တဲ့မိန်းမသားမှာ ထပ်ပြီး အပူများရတာပဲ လောက က မျက်လှည့်တအားဆန်တယ် အခုကောင်းချင်ကောင်းနေပေမယ့် နောက်ကောင်းချင်မှ ကောင်းတော့တာမျိုး အဲ့တာကြောင့် ဘယ်ပုခုံကိုမှ မယုံစားပါနဲ့ ငါမိန်းမသား ဒါပေမယ့် ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ အသက်ရှင်ပါ ။
မပြတ်သားတဲ့ မိန်းမက အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ နာကျင်ရသလို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ သေရတတ်တယ် သေတယ်ဆိုတာ အသက်ရှုရပ်သွားမှ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ ရပ်သွားမှ သေသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး အသက်တွေ ရှုနေပါလျက် ငါဘာကြောင့် အသက်ရှင်နေသလဲဆိုတာ မသိတော့ရင် ဆက်ပြီးရှင်သန်နေရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ မဲ့သွားတဲ့အခါလဲ လူတစ်ယောက် အသက်ပဲ ရှင်နေတော့တာ သူ့ဘဝတွေ ရှင်မလာတတ်တော့ဘူး ။
ဒါကြောင့် . . . ငါက မိန်းကလေးပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပျော့ညံ့ဖို့မတွေးနဲ့လိုအပ်တဲ့အခါ ယောက်ျားသားတွေထက် ပိုပြီး သန်မာပြရတယ် ။
တဈခြို့လူတှကေ ကိုယျ ယုံကွညျရလောကျတဲ့အထိ မထိုကျတနျကွဘူး